Fankasitrahan’ny Minisitera : Nahazo 2 tapitrisa ariary i Julien Rafaralahy
Ndremanjary Jean André, minisitry ny Fanatanjahantena...
« Nitombo indray ireo atleta mpanapitrisa ». Io no voalohan-tenin’i Ndremanjary Jean André, minisitry ny Fanatanjahantena, omaly nanoloana an’ireo atleta nahazo vokatra kaontinantaly sy eran-tany noraisiny.
Isan’ireo niavaka tamin’ity i Julien Rafaralahy, izay nandrombaka medaly volamena roa, nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an’ny kickboxing tany Szeged. Vola mitentina 2 000 000 ariary no nomen’ny minisitera azy teto.
« Hitanareo fa rehefa misy ny vokatra dia tsy maintsy mahazo sitraka ny mpamokatra », hoy ny minisitry ny Fanatanjahantena.
Vola 1 tapitrisa ariary no tamby omena an’ireo mahazo medaly volamena amina fifaninanana eran-tany raha 500 000 ariary kosa ny an’ny volafotsy sy alimo. « Efa napetraka tany am-boalohany izany ary hotohizantsika mba hampahavitrika ireo tanorantsika hirotsaka amin’ny fantanjahantena », hoy ihany i Ndremanjary Jean André.
Ho an’ireo medaly volamena amin’ny fifaninanana kaontinantaly kosa dia noferan’ny minisitera ho 500 000 ariary raha 250 000 ariary sy 150 000 ariary kosa ny tamby ho an’ireo mahazo medaly volafotsy sy alimo. Notolorana anjara tambiny ihany koa omaly ny ekipam-pirenena niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika natrehin’ny tsipy kanetibe (medaly volamena) sy ny taranja tolona (volafotsy sy alimo).